Inona no antenaintsika amin'ny Apple amin'ny 2015? | Vaovao IPhone
Roa ora latsaka ny hatramin'ny faran'ny taona dia tsy hitako ny fomba tsara hanidiana ny taona ao amin'ny Actualidad iPad noho ny miresaka kely momba izay mety hoentin'ny orinasa paoma ho antsika amin'ny taona 2015. Na dia efa nanome tady vitsivitsy aza isika tamin'ny farany podcast ity amin'ny taona, heveriko fa izao no fotoana sy toerana hiresahana izay hananantsika ary inona no mety hananantsika amin'ny taona izay manomboka tsy ho ela. Hamoaka ny baolina kristaly ve isika?
1 Apple Watch amin'ny lohataona
2 Apple Pay amin'ny sisa amin'izao tontolo izao
3 iPad Pro, ilay fanavaozana nandrasana hatry ny ela ny takelaka Apple
4 Apple TV, fanavaozana ihany amin'ny farany?
5 Fampisehoana Retina amin'ny Mac
Apple Watch amin'ny lohataona
Azo antoka fa hiseho ny Apple Watch, ny fisalasalana tavela amin'ity lafiny ity dia ny hoe io ve no tena antenaintsika rehetra. Tsy hangataka izahay ny faharetan'ny baterinao mandritra ny herinandro, satria fantatray fa tsy hitranga izany, misy zavatra maro manaporofo ho an'i Apple mba hampiharihary ny mpifaninana aminy amin'ny alàlan'ny fampisehoana fa nahavita nanao izay notadiavin'ny hafa izy nefa tsy nahomby. Ahoana ny fomba hitondrana ny interface miaraka amin'ny satroboninahitra famantaranandro? Inona no tena azontsika atao amin'ny Apple smartwatch? Hanana fahaleovan-tena kely ve isika ka tsy voatery hitondra ny iPhone ao am-paosintsika foana? Hahazo ny bateria ve i Apple hahafahantsika mandeha amin'ny alina tsy misy olana? Hanome fitaovana ho an'ny mpamorona hampiasa tena tsara amin'ny smartwatch an'i Apple ve izany? Fanontaniana maro izay hovaliana mandritra ny tapany voalohany amin'ny taona ho avy. Mety hidona amin'ny talantalan'ny Apple Stores amin'ny 14 febroary io raha ny tsaho maro.
Apple Pay amin'ny sisa amin'izao tontolo izao
Apple Pay dia mahazo dera be dia be avy amin'ny mpanao gazety rehetra sy avy amin'ny manam-pahaizana momba ny banky sy ny fiarovana. Ny rafitra dia tsotra ampiasaina, azo antoka ary azo antoka. Tsara daholo izany rehetra izany fa mbola mipetraka ny fanontaniana rehefa afaka mampiasa azy ivelan'ny Etazonia isika. Toa efa akaiky ny fidinana an-tanety any Angletera, saingy tsy misy vaovao avy amin'ny firenena eropeana sy ny kaontinanta amerikana. 2015 dia tokony ho ny taona niaingan'ny rafitra fandoavam-bola finday an'i Apple raha tsy tianao hitranga amin'ny andrana hafa tsy nahomby toa ny iTunes Radio, izay saika tsy tadidin'ny olona intsony. Ny fifanarahana amin'ireo banky lehibe sy mpanome karatra ary ny fanavaozana ny terminal an'ny orinasa lehibe sy kely dia tsy maintsy ho haingana ka Apple Pay no nampanantenainy.
iPad Pro, ilay fanavaozana nandrasana hatry ny ela ny takelaka Apple
Betsaka ny diso fanantenana rehefa nahita ny iPads vaovao tamin'ny 2014 tao amin'ny Apple Keynote farany teo. Ny iPad Mini 3 "decaffeined" izay ny Touch ID ihany no nampiana, ary ny iPad Air 2 miaraka amin'ny hery lehibe kokoa nefa tsy misy zava-baovao marina izay hahatonga ny mpampiasa hieritreritra ny hanao ny dingana vaovao ho an'ny taranaka vaovao toa tsy ampy ho an'i Apple hahavita ny hahatonga ny mirongatra ny varotra takelaka. Ny iPad Pro dia mety ho fanavaozana nandrasana hatry ny ela ny takelaka Apple tena manova ny tsena indray izany. Hybrid eo anelanelan'ny Mac sy iPad? Tsy azo inoana. Kitendry fizika haingo ivelany? Tena multitasking eo amin'ny écran? Fomba manokana IOS? Ny takelaka "premium" an'i Apple dia afaka nahita mazava ny lohataona tamin'ity lohataona ity, ary maro amintsika no manantena fa tsy ho iPad lehibe kokoa fotsiny io.
Apple TV, fanavaozana ihany amin'ny farany?
Apple TV dia mahita ny firongatry ny varotra. Ny rafitra mitovy amin'izany dia manana vidiny mirary kokoa ary ireo manana vidiny mitovy dia manolotra fiasa bebe kokoa noho ilay "boaty ambony" avy amin'ny Apple. Apple TV dia tsy maintsy (farany) mijanona tsy fialamboly tsotra ho an'ireo avy any Cupertino ary tena miloka amin'ny vokatra mamaky tany, feno endrika ary samy te hametraka ao amin'ny efitranony ny tsirairay. Rehefa afaka taona maro izay tsy misy fanavaozana lozisialy sy fantsona vaovao izay mandray anjara kely na tsy misy ho an'ny mpampiasa ivelan'ny Etazonia, 2105 no tokony ho taona ahitantsika ilay fitaovana vaovao amin'ny fahitalavitra Apple. Sa angamba ilay televiziona Apple nandrasana hatry ny ela? Tsy dia inoako loatra izany.
Fampisehoana Retina amin'ny Mac
Rehefa afaka elaela tamin'ny Macbook Pro miaraka amin'ny fampisehoana Retina sy ilay iMac 5K vaovao dia heveriko fa tonga ny fotoana handaozan'i Apple ny fampisehoana mahazatra ary hipetrahany amin'ny fampisehoana Retina amin'ny solosainy rehetra, ary hanaovana izany raha mbola mijanona ao anatin'ny vidiny mitovy amin'ny ny ankehitriny. Ny iMac 5K natokana ho an'ny matihanina noho ny vidiny, fa ny ambin'ny elanelan'ny iMac sy ny Macbook Air dia efa tokony hanana efijery mitovy amin'ny an'ny iPads, iPhones ary Macbook Pro miaraka amin'ny fampisehoana Retina.
Ireto no filokana ho ahy amin'ny taona ho avy, inona ny anao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Inona no antenaintsika amin'ny Apple amin'ny 2015?